Iapile airpods iziphumo zovavanyo lobomi bebhetri: zihlala ixesha elingakanani?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Iziphumo zovavanyo lwebhetri yeApple AirPods: zihlala ixesha elingakanani?
Iziphumo zovavanyo lwebhetri yeApple AirPods: zihlala ixesha elingakanani?
Sichithe iintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kuvavanywa iiApple AirPods kwaye sele ubona eyethu uphononongo olupheleleyo lweapile kunye neapos; , Kodwa kukho inkalo ethile yamava efanele ukukhankanywa ngokwahlukeneyo: ubomi bebhetri.
U-Apple wathembisa ukuba ii-headphone ziya kuhlala iiyure ezi-5 nganye ngentlawulo enye, ityala lona ngokwalo libonelela ngokudlala iiyure ezingama-24, kungoko sizibuze: Emva kwayo yonke loo nto, thina & apos sele sivavanye abanye okhuphisana nabo njenge I-Samsung Gear IconX kwaye ngelixa sithanda uyilo olucace ngakumbi, sifike phakathi kweyure kunye neyure kunye nemizuzu elishumi elinesihlanu, kuxhomekeke kubungakanani.
U-Apple uthembisa iiyure ezi-5 zobomi bebhetri kwaye sifumene eziyi-6!
Ewe, ungakhathazeki: iiApple AirPods azihlali nje kwisithembiso, kodwa zigqithile kulindelo: singene kwiHeartRadio kwaye saqala ukusasaza singayeki de kwafa ibhetri. Uvavanyo luqale nge-11: 04 AM kwaye lwagqitywa ngo-5: 06 PM, esebenza iiyure ezi-6 kunye nemizuzu emi-2 yobomi bebhetri kwityala elinye. Inomdla!
Into esingachukumisanga yiyo yile yokuba ubuyisela nje ii-AirPod kwityala labo elifana nelamazinyo kwaye bahlawuliswa ngokupheleleyo ukusuka kwi-0 ukuya kwi-100% kwimizuzu nje engama-20. Xa kuthelekiswa, isibini esifanayo seGear IconX kunye neeapos esizivavanyileyo zithathe ixesha elibuhlungu kangangeyure enye kunye nemizuzu eli-10 ukuze sihlawuliswe ngokupheleleyo.
Lo ngumdlalo otshintshelwe ii-earbuds ezingenazingcingo: ngokuqinisekileyo, abantu abaninzi abayithandi uyilo lwee-AirPods ezineengcebiso eziphuma ezindlebeni zakho, kwaye okona kubaluleke kakhulu, abanye abantu abazithandi ii-AirPods ukuba zingalinganiyo Iindlebe zabo, kodwa & apos kunzima ukuphikisa ukuba iApple yenze umsebenzi omangalisayo ngokwenza ukuba ezi zinto zincinci zihlale kwaye zihlale.
Iqela lomfanekiso elingasebenziyo.
ipad 8th isizukulwana esikhusela isikrini
I-iPad 7th gen yinto enkulu, kodwa qwalasela oku ngaphambi kokuthenga enye
Ukuthelekisa i-Samsung Galaxy S5 kunye ne-Samsung Galaxy Qaphela 3
Ungazikhubaza njani izaziso ezicaphukisayo kwi-Android
Uphengululo lweNqanaba leNqaku leSamsung le-Samsung
Ixabiso le-LG V20 kunye nomhla wokukhutshwa
Ungayibeka njani kwakhona i-ID yakho yentengiso, kwaye uphume ekujongeni umkhondo wentengiso ekujolise kuyo kwiifowuni ze-Android, iOS kunye neWindows